Posted by blackroze at Sunday, March 31, 2013
လရိပ်အိမ် on 1 April 2013 at 00:29 said...
တူတူပါဘဲကွယ်။ ကိုစိုးသူရဲ့ live show ကြည့်ချင်တာ အရမ်းဘဲ။
MLTR လဲကြည့်ချင်တယ်။ :)
TunTun on 1 April 2013 at 21:23 said...
I was watching via the MRTV site. But connection wasn't that good. I wish I was there too..
မိုးညချမ်း on 1 April 2013 at 21:36 said...
မမရဲ့ သူငယ်ချင်းမလေးလည်း မမကို သတိရနေမှာပါ ... ပိုစ့်လေးဖတ်ရင်း ညလေးတောင် ငယ်ဘ၀လေးကို လွမ်းသွားတယ် ... :)
အလွမ်းသံလေးတွေ ခံစားနားဆင် ဖတ်ရှု့သွားတယ်နော်...:)
Candy on4April 2013 at 00:56 said...
ကန်ဒီလည်း စိုးသူကို ကြိုက်ခဲ့ဖူးတယ်.. ဒါပေမယ့် သူ့သီချင်းတွေ ဘာတွေတော့ အဲ့လောက်နားမထောင်ဖူးဘူး :D
ခြောက်တန်းလောက်တုန်းက ကိုဏီတို့အတန်းထဲမှာလည်း စိုးသူအရမ်းကြိုက်တဲ့ ၀၀တုတ်တုတ် ကရင်မလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူလည်း ခရစ်ယာန်ပဲ။ တစ်နေ့ သူ့ကို စချင်တဲ့ကောင်လေးတွေက စိုးသူဟာ...နှာခေါင်းကြီးတယ်..၊ ပင်လယ်ထဲ ပက်လက်ရေကူးရင် ငါးမန်းလာပြီဆို ပြေးကြရမှာ စတဲ့ လူရွှင်တော်တွေသုံးတဲ့ စကားသုံးပြီး သူ့ကိုနောက်တော့...
ရန်ဖြစ်လိုက်တာ ၀က်ဝက်ကို ကွဲရောပဲလေ...။
ခု ညီမရဲ့စာလေးကိုဖတ်မိပြီး ကိုဏီပြန်သတိရမိသွားတာ...
နွေတေးရှင် (မင်းဧရာ) on6April 2013 at 18:50 said...
ငယ်ငယ်ကအကြောင်းး သိပ်သတိရစရာ မရှိလှပါဘူးအေ...
hninnse young on 8 April 2013 at 23:08 said...
ကျနော်လဲ စိုးသူ သီချင်းတွေကြိုက်နှစ်သက်တယ်. အခု သီချင်းလေးလဲ နားထောင်ကောင်းတယ်။။။
San Htun on9April 2013 at 11:02 said...
ဆယ်စုနှစ်ကြာခဲ့ပေမယ့် စိုးသူက အရင်အတိုင်းပဲ..ငယ်ငယ်တုန်းက စိုးသူအရမ်းကြိုက်တယ့် သူငယ်ချင်းမလေးက တူပုန်းတမ်းဆော့ရင် စိုးသူနှာခေါင်းထဲ ဝင်ပုန်းမလို့ တယ်..ပေါက်တီးပေါက်ကရ ကြံကြံဖန်ဖန်..တို့ များ ငယ်ငယ်တုန်းက စိုးသူ၊ တူးတူး သီချင်းတွေ ခေတ်စားတယ်...